दुबो फेर्दै, खेल्दै ! – Sourya Online
दुबो फेर्दै, खेल्दै !
सौर्य अनलाइन २०७६ मंसिर ६ गते ७:५८ मा प्रकाशित
पोखरा । १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आउन १० दिनमात्रै बाँकी छ, तर महिला फुटबल हुने रंगशालामा भने बिहीबारबाट बल्ल दुबो फेर्न थालिएको छ । पोखरा रंगशाला निर्माण गरिरहेको ठेकदार कम्पनीले कृत्रिम घाँसेमैदान (एस्ट्रो टर्फ) बनाउन गिट्टी बिछ्याइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले प्रकृतिक घाँसै मैदान बनउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला नै सागका लागि पोखरा रंगशाला तयार हुनेमा प्रश्न उठेको थियो । त्यसमाथि भारतबाट ल्याएर सारिएको अधिकांश दुबो मरेपछि नयाँ समस्या सुरु भयो ।